Hazie Firefox Search Box (na nke gị Blog!) | Martech Zone
Tọzdee, Machị 1, 2007 Sunday, October 4, 2015 Douglas Karr
May nwere ike ịchọpụta nke m ugbu a m bụ onye Firefoxaholic. M hụrụ n'anya nchọgharị… ọ bụ fechaa na dị mfe iji. Otu n'ime njirimara ndị ọzọ masịrị m bụ ndepụta ọchụchọ n'elu aka nri. Enwere m ike ịnwe igwe nchọta kachasị amasị m ebe ahụ ma tụgharịa na azụ.
Iji tinye engine nchọta maka Firefox, naanị ị ga-aga Search Engine Tinye On Peeji na pịa ndi nke ichoro ha.
Ma ị maara na ị nwere ike iwuli otu maka saịtị nke gị? Ọ dị ezigbo mfe. Usoro maka plugins Search Engine bụ nchikota faịlụ XML (.src) na onyonyo iji gosipụta. Tonight, I got an idea idea olee otú m ga-esi tinye saịtị m na ndepụta nke Search Enjini?
Ọ bụ n'ezie ezi mfe. Adreesị ọchụchọ m maka saịtị m (ịnwere ike ịnwale nke a na igbe ọchụchọ m) bụ http://martech.zone's=something ebe “s” bu ihe agbanwe agbanwe na ihe bu okwu a na acho.
Itinye ihe ndị a na ụdị dị mfe, Edere m ụfọdụ koodu iji mepụta src faịlụ nke na - eji tinye ihe nchọgharị gị na ihe nchọgharị gị. Pịa ebe a iji gaa n'ụdị ma tinye blọgụ ma ọ bụ saịtị nke gị (ọ bụrụ na o nwere ike ọchụchọ), na blog gị!
Ọ bụrụ na ị hụrụ blog onye ọzọ n'anya, dịka John Chow… Ịnwere ike ịgbakwunye nke gị John Chow Search engine na s dị ka ihe agbanwe agbanwe! URL: http://www.johnchow.com/'s=something. Dị ka Problogger? Nwere ike ịgbakwunye nke ahụ n'otu ụzọ ahụ!
Matt Cutts? URL: http://www.mattcutts.com/blog/ na s maka agbanwe.
Ọ gwụla ma ahaziri, s na-agbanwe agbanwe maka blọọgụ WordPress nke mere na nke a nwere ike inye aka. Nwere olileanya na ọ masịrị gị!
Tinye blọọgụ gị na Nchọgharị Nchọgharị…
Ana m agbakwunye tinye Google CSE m site na usoro a mana enwere m nsogbu… gịnị ka m na-efu?
Nke a bụ nnukwu ihe .. daalụ Douglas!
M ga-anwale nke ahụ na-esote. Firefox dị ntakịrị na nkwupụta ụzọ maka faịlụ isi. Aghaghị m ịghọgbu ya iji mee ka nke a rụọ ọrụ. Ka m lelee na nke ahụ n'otu ụbọchị ma ọ bụ karịa, m ga-ahụkwa ihe anyị nwere ike iwepụta. Ana m eche na ọ bụ ụfọdụ ụdị okwu na ihe odide gafere.
Dị ezigbo mma chọta. Ana m aga ịchọta post iji jikọọ, nke a ga-azọpụta oge.
Aghaghị m ikwupụta na ọ bụ maka ọdịmma onwe m. Ana m achọkarị ebe ihe na-eme nke m chefuru. 🙂
Achọpụtara m na nyocha saịtị google (iji saịtị ahụ: isiokwu) na-enyekarị nsonaazụ dị mma karịa iji nyocha nke ime WordPress.